Ndị nọọsụ na-ekiri ka ndị na-eri ahụ na-agbaba n'enweghị nsogbu na 'ụlọ ndozi' nke Denmark - Ụwa 2022
Ndị nọọsụ na-ekiri ka ndị na-eri ahụ na-agbaba n'enweghị nsogbu na 'ụlọ ndozi' nke Denmark
A na-akpọ ha "ụlọ ndozi" na nke dị na Copenhagen na-ewepụ ndị riri ahụ 8,000 n'okporo ámá na mgbalị dabere na echiche: Ọ bụrụ na ịnweghị ike ime ka ha kwụsị, ọ dịkarịa ala wepụ ha n'okporo ámá.
Ụlọ ahụ, nke dị na mpaghara Vesterbro, enyela ndị riri ahụ ebe ha ga-eji ọgwụ klas A na-enweghị akwụkwọ ikpe. Mmadụ asatọ n'otu oge, na mmadụ anọ ọzọ nọ n'ụgbọala gbawara n'èzí na-agba ọgwụ ha. N'oge usoro a, ndị nọọsụ na-ele ha anya na-ahụ na gburugburu ebe obibi dị ọcha dịka o kwere mee; na agịga na-adịghị mma, saline, owu owu na mgbapụta. Nnukwu eserese nke nwoke na-egosi ọbụna ndị riri ahụ ebe ndị isi na akwara na akwara dị, igwe ga-enye ìhè maka akwara dị mma ka ha na-agba, The Guardian kọrọ.
Ihe a niile na mgbalị iji gbalịa wepụ ndị ahụ riri ahụ na ọgwụ ha, ka emechara, ndị na-abata n'ime ụlọ anaghị achọ ịnwụ.
"Site na cocaine, ị na-achọkwu ya ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ya, ị ga-ewere ya, "Maja Petersen, 38, gwara The Guardian. "Akpọrọ m ndụ asị. Enweghị m ndụ ọzọ. Ma ọ dịtụbeghị mgbe m buru oke ibu. Ọ dịtụbeghị mgbe m gbalịrị ịnwụ."
Enweela ihe karịrị injections 49,000 n'ime ụlọ ahụ kemgbe ọ mepere n'October. Agbanyeghi na ọgụ a na-amalite mgbe ụfọdụ, The Guardian kọwara ya dị ka inwe ikuku nke ụlọ akwụkwọ. Ndị nọọsụ agwọtala ọgwụ iri atọ na isii kemgbe ọ mepere, mana ọ nweghị nke ọ bụla n'ime ha nwụrụ.
Kwa ụbọchị ndị ọkachamara ahụike na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na-enye ọgwụgwọ mana naanị ise anabatala ya ruo ugbu a.
Na-agbakwụnye na uru nke ụlọ ahụ, ọnụ ọgụgụ sirinji na ọgwụ ndị a na-ebuli n'okporo ámá ka ebipụla ọkara. A na-ebupụ ihe ruru 10,000 sirinji ruru unyi n'okporo ụzọ kwa izu. Enweela mbelata nke izu ohi pasenti atọ yana izu ohi ụgbọ ala na ime ihe ike agbadala pasentị ise.
"Enweghị mba nke edozila nsogbu a, n'ezie, ruo mgbe anyị ga-edozi ya, anyị nwere ike gboo mkpa ha," Michael Olsen, onye bi n'ógbè ahụ nyere aka mee ka ndị ọchịchị kwenye ịkwado ụlọ ahụ, gwara The Guardian. "Anyị anaghị eme nke a iji mee ka ndị mmadụ pụọ ​​na ọgwụ ọjọọ. Anyị na-enwe obi ụtọ ma anyị mee ya, ma na mbụ ọ na-enyere ndị mmadụ aka n'ọnọdụ ha nọ."